Ny fandraisana ny Apple Watch Series 3 dia mitombo raha ny an'ny Series 0 kosa mihena | Avy amin'ny mac aho
Ny Series 3 no maodely maoderina indrindra sy haingana indrindra an'ny Apple Watch misy eny an-tsena ankehitriny ary toa lasa fanerena nilaina ny smartwatch an'i Apple lasa benchmark amin'ny indostria, farafaharatsiny izany no toa lazain'ny ankamaroan'ny mpandalina.
Ireo mpandinika dia miorina amin'ny loharano maro sy ny fikarohana ny tsena, izay amin'ny ankamaroan'ny tranga toa lavitra ny zava-misy izy ireo. Mba hanandramana hialana amin'ny fisalasalana, ny mpamorona David Smith, dia namorona sary momba ireo fitaovana mampiasa ny fampiharana Pedometer ++.
Amin'ity tabilao ity dia hitantsika fa hatramin'ny nahatongavany teny an-tsena dia nanjary ny Apple Watch Series 3 isam-bolana ny maodely Apple Watch efa be mpampiasa indrindra, mihoatra ny teo alohany rehetra. Araka io tabilao io, ny 33% amin'ny Apple Watch izay mampiasa ity fampiharana ity dia mifanaraka amin'ny Series 3, raha ny Apple Watch kosa dia maneho 30%, rehefa talohan'ny nanombohan'ny Series 3 dia nahatratra 45% izany.
Ity tabilao ity dia manondro fa ny ankamaroan'ny mpampiasa Series 0, Nanavao ny fitaovanao ho an'ny Series 3 ianao, satria ity maodely farany ity dia manome endrika sy fiasa vaovao ampy, ary koa fanatsarana lehibe amin'ny hafainganana, raha oharina amin'ny maodely ho an'ny taranaka voalohany, ny maodely iray izay isaky ny fanavaozana vaovao dia somary miadana kokoa.
Nilaza i Smith fa mihoatra ny azo inoana izany Apple dia tsy manome fanampiana ho an'ny watchOS 5 amin'ny Series 0, izay isan-jaton'ny mpampiasa dia mahatratra 25%. Tonga tao an-tsena ny Apple Watch Series 0 tamin'ny martsa 2015 ary isaky ny fanavaozana vaovao dia nitombo tsikelikely ny fahasamihafana eo amin'ny fahombiazan'ny maodely vaovao miaraka amina voalohany, araka ny nampoizina, namadika ilay maodely voalohany ho fitaovana ahafahantsika mahazo fampandrenesana indraindray mamaly azy ireo, hafa ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny fananganana Apple Watch Series 3 dia mitombo raha mihena kosa ny an'ny Series 0